आजको बजार वृद्धिलाई विश्लेषण गरेर हेर्दा ! - नेपालबहस
आजको बजार वृद्धिलाई विश्लेषण गरेर हेर्दा !
| १५:५३:४४ मा प्रकाशित
पुष २३, काठमाडाैं । आज नेप्से परिसूचक १५ दशमलव ९१ अंकले वृद्धि हुँदै २१९४ दशमलव ४८ को विन्दुमा बन्द भएको छ । नेप्से परिसूचक शुन्य दशमलव ७३ प्रतिशतले वृद्धि भएकोमा ५ अर्ब ८७ करोडको शेयर कारोवार भएको छ ।
दोश्रो बजार २१८१ को विन्दुमा खुलेकोमा २२०४ को उच्च विन्दु सम्म पुगेको थियो । नेप्सेको आज न्यून विन्दु २१७९ रहेको छ । आज कारोवार रकम पनि अघिल्लो कारोवार दिनको तुलनामा केही वृद्धि भएको छ । बजार वृद्धि हुने दिन कारोवार रकम वृद्धि हुँदै जानुलाई बजारको वृद्धि दिगो हुने आकँलन गर्न सकिन्छ । त्यस्तै आजको ग्राफ हेर्दा पनि सकारात्मक प्रवित्ति नै रहेको छ । बजारले आज पनि २२०० को विन्दुलाई प्रतिरोध बनाएको छ । ईण्ट्राडेमा बजार २२०४ सम्म पुगे पनि बजार बन्द हुँदा भने २२२० को विन्दु मुनी नै बन्द भएको छ । तर अन्तिम समयमा भने बजारले माथिल्लो दिशा समात्न प्रयास गरेको थियो ।
आज अन्य उपसुचक बाहेक सम्पूर्ण उपसुचकमा वृद्धि देखिएको छ । सबै भन्दा धेरै ट्रेडिङ्ग उपसुचकमा सर्वाधिक वृद्धि देखिएको छ। वाणिज्य बैंक उपसुचकमा पनि शुन्य दशमलव ७९ प्रतिशतको वृद्धि देखिएको छ।
नेप्से परिसूचक आज पनि दोहोरो अङ्कले उकालो २ दिन पहिले
सोमबार यी तीन कम्पनीको शेयरमूल्य समायोजन ३ दिन पहिले
एनसीसी बैंकको शेयरमा लगानीकर्ता किन भुम्मिए ? यस्तो छ कारण ? ३ दिन पहिले
नेप्सेमा दुई वाणिज्य बैंकको शेयर सूचीकृत, कुनको कति ? ६ दिन पहिले
आज यी पाँच कम्पनीले गरे सर्वाधिक कारोबार ? १४ घण्टा पहिले
वामदेवले थाले एकता अभियान १६ घण्टा पहिले
पत्रकार महासंघ तनहुँका ६ पूर्वाध्यक्ष पुरस्कृत २ दिन पहिले
बाइडेनद्वारा अर्थमन्त्रीमा मनोनित जेनेट येलेनलाई अनुमोदन २ दिन पहिले
सिसाजस्तै कडा बरफ जमेपछि आधा परिवारले गाउँ छाडे ६ दिन पहिले
आजबाट लाइसेन्सकाे अनलिमिटेड फारम भर्न सकिने ६ दिन पहिले
चितवनमा विकास निर्माणको अवस्था नाजुक, विनियोजित बजेटको २१ प्रतिशत मात्र खर्च ५ दिन पहिले
भारततर्फ तस्करी भइरहेको डिजेल बरामद ७ दिन पहिले
लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जको जङ्गलमा आगलागी ४ हप्ता पहिले
ट्रम्पविरुद्ध डेमोक्र्याट्सले महाभियोग ल्याउने चेतावानी २ हप्ता पहिले
आज सुनको मूल्य प्रतितोला ६०० ले उकालो २ हप्ता पहिले
माघे संक्रान्तिबाट नेपालीबीच आपसी एकता र सद्‌भाव अभिवृद्धि गरी बृहत् राष्ट्रिय एकता थप सुदृढ पार्न मद्दत पुगोस : राष्ट्रपति २ हप्ता पहिले
सिमानामा पिलर गाडेपछि रेलमार्ग विस्तार विवाद चुलियाे २ हप्ता पहिले
७२ विद्यालयमा एकैदिन, एकैपटक चुनिदै व्यवस्थापन समिति ६ दिन पहिले
एन्फाको १९ औं साधारण सभा आजबाट सुरु १ हप्ता पहिले
महासचिव विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय कार्यदल गठन ५ महिना पहिले
“संविधानको मर्मअनुरुप नै मिडियासम्बन्धी कानून आउँछ” : प्रधानमन्त्री ओली १२ महिना पहिले
ओलीको राजनीतिक क्षेप्यास्त्र र बामदेवको रक्षा कवच ९ महिना पहिले
महिला चिकित्सक पाएपछि खुशी छन् दार्चुलाका महिला ५ महिना पहिले